शिक्षा Archives - Naya Pusta
Naya Pusta January 16, 2018 शिक्षा
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ साल कात्तिक/मंसिरमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोत्तर दोस्रो वर्ष २०७३ आंशिकको संस्कृति, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार र इतिहास विषयको परीक्षाफल मंगलबार प्रकाशित गरेको छ। उक्त परीक्षाफल www.edusanjal.com, www.educationsansar.com, educationkhabar.com / www.tu.ntc.net.np मा हेर्न सकिनेछ भने नेपाल टेलिकमको १६०२ मा डायल गरी वा
Naya Pusta January 14, 2018 शिक्षा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले गएको असार र साउन महिनामा सञ्चालित विज्ञानतर्फ चार वर्षे बिएस्सी दोस्रो वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशित गरिएको छ। उक्त परीक्षाफल www.edusanjal.com, www.educationsansar.com, educationkhabar.com र www.tu.ntc.net.np मा हेर्न सकिनेछ भने नेपाल टेलिकमको १६०२ मा डायल गरी वा ४९४९ मा एसएमएस गरेर पनि जानकारी पाउन
कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक, नतिजा पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणालीमा (नतिजा हेर्ने तरिकासहित)
Naya Pusta January 13, 2018 January 13, 2018 Special News, शिक्षा
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को नियमिततर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार बेलुकी एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले पहिलो पटक ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार सबै समूहको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले असार १ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा ३ लाख ४७ हजार ७४८ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ७४
आज कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने परीक्षा बोर्डको तयारी
Naya Pusta January 13, 2018 January 13, 2018 शिक्षा
काठमाडौं, २९ पुस । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत असारमा लिएको कक्षा ११ को नतिजा शनिबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि बोर्डको बैठक समेत डाकिएको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्न अपरान्ह तीन बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । परीक्षाको नतिजा ग्रेडिङ्मा सार्वजनिक गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
Naya Pusta January 11, 2018 छापाबाट, शिक्षा
आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । कानुनी रूपमा संक्रमणकालीन व्यवस्था नहुँदा यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा आउन निकै समय लाग्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको बुधबारको बैठकमा आयोग सदस्य तथा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले
Naya Pusta January 2, 2018 शिक्षा
काठमाडौँ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०७४ जेठमा सञ्चालित कानुन संकायतर्फ बिएलएलबी पाँचौ वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशित गरेको छ। परीक्षाफल wwww.edusanjal.com मा हेर्न सकिने र नेपाल टेलिकमको १६०२ डायल गरी तथा ४९४९ मा एसएमएस गरेर पनि जानकारी पाउने सकिनेछ।
परीक्षाफल प्रकाशन (हेर्ने तरिकासहित)
Naya Pusta December 26, 2017 शिक्षा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत जेठ महिनामा सञ्चालित कानून संकायतर्फ एलएलबी तृतीय वर्ष र व्यवस्थापन संकायतर्फको स्नातक तह तीनवर्षे बिबिएस तेस्रो वर्ष आंशिक तथा मौका परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरेको छ। परीक्षाफल www.edusanjal.com र http://www.tu.ntc.net.np/ मा हेर्न सकिने छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको १६०२ मा डायल गरी वा
लौ पढ्नुहोस् सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अंग्रेजी !
Naya Pusta December 24, 2017 छापाबाट, शिक्षा
काठमाडौं । दसैंमा के-के गरिन्छ' भन्ने वाक्यलाई अंग्रेजीमा कसरी उच्चारण गरिन्छ ? अंग्रेजी भाषामा सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिका लागि कुनै कठिन प्रश्न होइन यो । धेरथोर अध्ययन गरेका विद्यार्थी र शिक्षकका लागि त झन् यो प्रश्न अत्यन्तै सहज हुनुपर्ने हो । तर, परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माणका लागि एकै ठाउँमा जम्मा भएका राजधानीका
यस वर्षको एसईई परीक्षाको तालिका सार्वजनिक (विषय तालिकासहित)
Naya Pusta December 20, 2017 December 20, 2017 शिक्षा
काठमाडौं । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को तालिका सार्वजनिक भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार चैत ८ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । तालिका अनुसार चैत ८ र ९ गते अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली विषयको परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । त्यस्तै चैत १२ गते अनिवार्य
Naya Pusta December 13, 2017 शिक्षा
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले बुधबार महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । आयोगले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको सूचना यस्तो रहेको छः